सर्वशुलभ सेवा प्रदान गर्दै सिद्धबाबा अस्पताल::Best News Experience from Nepal
बुटवल । स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रमुख केन्द्रका रुपमा स्थापीत रुपन्देहीमा पछिल्लो समय सबै विशेषज्ञ सेवाहरु एकैठाउँमा सिद्धबाबा सुपरस्पेशलिष्ट इन्टरनेशनल हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि. प्रदान गर्दै आएको छ ।
यस क्षेत्रमा निजिक्षेत्रबाट संचालनमा आएका अस्पतालहरु मध्ये ठुलो लगानीमा संचालनमा आएको यस अस्पतालले सबै बिशेषज्ञ सेवाहरु एकै ठाउँबाट प्रदान गर्दै आएको हो ।
स्थापनाको छोटो समयममै अस्पतालले सर्वशुलभ गुणस्तरीय बिशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्दै सबैको मन जित्न सफल भएको छ । अस्पतालमा आउँने निम्न वर्ग देखि सम्पन्न वर्ग सम्मका मानिसहरु अस्पतालको गुणस्तरीय सेवाबाट प्रभावित भएको बताउँदै बुटवललाई मात्र नभएर यस क्षेत्रलाई नै यस अस्पतालको महत्व रहेका बताउने गरेका छन् । अहिले सिद्धबाबा सुपरस्पेशलिष्ट इन्टरनेशनल हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा. लि.सबै प्रकारका विशेषज्ञ सेवाहरु प्रदान गरेको अस्पतालका प्रमुख डा.नेत्र रानाको भनाइ छ । उहाँले अखबार न्यूजसंग भन्नुभयो अस्पतालबाट महिला तथा प्रसुुती सेवा, मस्तीष्क तथा स्नायुु, जनरल मेडीसीन, मुुटुु रोग, मृगौला रोग, दम ,छाती तथा फोक्सो रोग, रेडीयोलोजी सेवा प्रदान गरिदै आएको छ । त्यसो त अस्पतालले अहिले निशुल्क रुपमा बिरामीको चेक जाँच गर्नुका साथै २४ सैं घण्टा ईमरजेन्सी सेवा प्रदान गर्दै आएको बताएको छ । बुटवल मण्डप नजिकै रहेको सिद्धबाबा अस्पतालमा सेवा लिएर आएका बिरामीहरुले भने अस्पतालको प्रसंसा गरेका छन् । अस्पतालका अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठले भने हामीले सर्वशुलभ ढंगबाट सबैलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको पहुँच पुर्याउने उद्देश्य राखेका छौ । हाम्रो सेवाबाट बिरामीहरुले खुशि व्यक्त गरेको पाउँदा आफु पनि खुशि रहेको बताए ।
अस्पतालमा आई.सि.यू., सि.सि.यु सुविधा सम्पन्न ए. सि. सहितको जनरल वार्ड लगायत अन्य सेवा सुविधा समेत रहेको छ ।
विशेषज्ञ सेवा एकै ठाउँमा दिन चाहन्छौ
डा. नेत्र राना
सिद्धबाबा सुपरस्पेशलिष्ट इन्टरनेशनल हस्पिटल
एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.
तपाइको अस्पतालबाट के कस्ता सेवा प्रदान गर्दै आउनु भएको छ ?
बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि पूर्व पट्टि रहेको यो अस्पतालमा विशेषज्ञ सहितको सुपरस्पेशलिष्ट सेवाहरु हामीले प्रदान गर्दे आइरहेका छौं । हाल हामी ओ. पि .डि. २४ घण्टा, इमरर्जेन्सी, प्रयोगशाला, आई. सि यु., सि.सि.यु.जनरल वार्ड, हेमोडाइलाइसिस, फार्मेसी लगायत को विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्दे आइरहेका छौ । समग्रमा भन्दा हामीले विशेषज्ञ सहितको यस क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरेका छौ ।
सबै क्षेत्रका विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्नु भएको रहेछ ,सेवाको गुणस्तरीयता कस्तो छ ?
हामीले यस क्षेत्रकै नमुना अस्पतालको रुपमा यस अस्पताललाई स्थापना गर्ने उद्देश्यले संचालन गरेका हौ । अस्पतालको वास्तविक उद्देश्य गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्नु नै हो । गुणस्तरीय सेवा प्रदानको लागि हामी विभिन्न अत्याधुनिक प्रविधि सहितका मेसिनहरु जडान गरि अगाडि बढि रहेका छौं । हाम्रो प्रमुख उद्देश्य सर्वशुलभ ढंगबाट गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने रहेको छ ।
सबै बर्गका बिरामीहरुले यो अस्पतालमा उपचार गराउन सक्छन् त ? निम्न आय श्रोत भएकालाई केही व्यवस्था छ ?
निकै सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो, हाम्रो अस्पताल सञ्चालनको उद्देश्य नै निम्न, मध्यम वर्गिय, कमजोर, अति कमजोर बिरामीहरुले समेत उपचार गराउन सकुन् भन्ने हो । यदि वास्तविक गरिब, अशाय, अशक्त नै हो भनि पहिचान भएमा विशेष छुट वा निशुल्क उपचार समेत गर्ने हामीले गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । त्यसैले सबै बर्गका बिरामीहरुले हाम्रो अस्पतालमा उपचार गर्न सक्छन् त्यसमा कुनै समस्या छैन ।
यो अस्पतालमा चिकित्सकहरुको टीम कस्तो छ ? कुन कुन रोगका विशेषज्ञहरु हुनु हुन्छ ?
युवा विशेषज्ञ डा. हरुको आफ्नै लगानीमा संञ्चालन गरेको यस अस्पतालमा मुटुरोग विशेषज्ञ, नशा मस्तिष्क तथा स्नायुरोग विशेषज्ञ वरिष्ट रेडियोलोजि, मृगौलारोग विशेषज्ञ, दम तथा छातिरोग विशेषज्ञ महिला तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ सहितको विशेषज्ञता सेवा प्रदान गरिरहेका छौं । समग्रमा भन्दा युवा चिकित्सकहरुको टिम हामीसंग छ । यो टिमले विभिन्न अस्पतालहरुमा आफ्नो सेवा प्रदान गरिसकेको छ अब एकै स्थानबाट सबै सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले हामीले सेवा दिन लागेका हौ ।
छोटो अर्थमा भन्दा तपाइको अस्पताललाई आम जनमानसले कस्तो अस्पताल भनेर बुझ्ने ?
सम्बन्धित रोगको उपचार सम्बन्धित विशेषज्ञद्धारा गराउनु पर्छ । मध्यम वर्गिय अथवा न्युन आयश्रोत भएका बिरामीले सरल रुपमा उपचार गराउन सक्ने हाम्रो अस्पताल हो । अझ बढी सबै बर्गको पहुच भएको अस्पताल भनेर आम जनमानशले बुझ्नु पर्दछ ।
गुणस्तरीय सेवा दिन चाहन्छौ
बुटवलमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल संचालन गर्ने सोच कसरी बनाउनु भो ?
बुटवललाई बाहिरबाट हेर्दा हामीले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको हवका रुपमा देखि रहेका छौ, तर यस क्षेत्रमा हामीले स्वास्थ्यलाई अझ बढि सुविधा सम्पन्न बनाउने उद्देश्यका साथ यो अस्पताल खोल्ने योजना आएको हो । यहाँ सुविधा सम्पन्न विशेषज्ञ अस्पताल नहुदा प्राय बिरामीहरु उपचारको लागि भरतपुर, काठमाण्डौं सम्म जानुपर्ने र त्यस्तो अवस्थामा कतिको बिचैमा मृत्यु सम्म हुने गरेको यहालाई थाहा नै छ । त्यस कारणले गर्दा उपचारको अभावले कसैको पनि अकालमै मृत्यु नहोस् भन्ने सोचका साथ हामी यस ठाउँमा सुपरस्पेशलिष्ट अस्पताल स्थापना आवश्यक रहेको महशुस गरि स्थापना गरिएको हो ।
कति लगानीमा अस्पताल संचालन गर्नुभयो ? के के सुविधाहरु छन् अस्पतालमा ?
हाम्रो अस्पताल करौडौको लगानीमा हामीले सञ्चालनमा ल्याएका छौं । यति नै भन्नु भन्दा पनि हामीले ठुलो लगानीमा सबैलाई सुविधा होस भन्ने हिसाबले अस्पताल संचालन गरेका हौ । यस अस्पतालमा ओ. पि. डी., २४ सै घण्टा इमरर्जेन्सी, फार्मेसी, प्याथोलोजी, प्रसुती सेवा आई.सि.यू., सि.सि.यु सुविधा सम्पन्न ए. सि. सहितको जनरल वार्ड लगायत अन्य सेवा सुविधा रहेको छ । सुविधा सम्पन्न सेवा प्रदान गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो ।
कस्तो समुदायलाई लक्षित गरि अस्पताल संचालन गर्नु भएको हो ?
कस्तो समुदाय भन्नु भन्दा पनि हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैको सर्वशुलभ पहुच होस भन्ने चाहन्छौ । गरिब, अशाय, अशक्त तथा मध्यम वर्गिय स्तरको जनसमुदायलाई लक्षित गरि अस्पताल स्थापना गरिएको हो । हाम्रो अस्पतालमा सबै बर्ग समुदायका मानिसहरुले सहज रुपमा सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् ।
अस्पतालमा कुन कुन क्षेत्रका व्यक्तिको लगानी छ ?
हाम्रो अस्पतालमा म सहित छ जनाको लगानी छ । त्यस मध्ये अन्य पाँच जना युवा विशेषज्ञ चिकित्सकहरु हुनु हुन्छ उहाँहरु सबैले यहि अस्पतालमा सेवा प्रदान गर्नु भएको छ । म आफु व्यवसायी भए पनि अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नका लागि खटि रहेको छु । यो जुझारु टिमले राम्रो सेवा प्रदान गरि रहेको छ ।
अस्पताल त सेवा प्रदायक संस्था हो, सेवा संग संगै लगानीको सुरक्षा गर्ने आधार के हुन् ?
हो स्वास्थ्य र शिक्षा भनेको सेवा मुलुक नै हुनुपर्दछ हाम्रो सोचाई पनि सेवा मुलक नै हो । अहिले हामी लगानिको रक्षा गर्न भन्दा पनि बिरामीहरुलाई कसरी गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्ने भन्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । जहाँ सम्म यहाँले भने जस्तो लगानी सुरक्षाको कुरा छ हामी पहिला सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन चाहन्छौ ।